सरकारले विदेशबाट घर फर्कनेलाई देशमै केही गर्न सक्ने सपना दिन सक्नुपर्छ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार १७, २०७७ बुधबार १२:५३:९ | डा. गणेश गुरुङ
अहिले झण्डै पाँच छ लाख नेपाली घर फर्कन अनुमान छ । अर्कोकुरा के छ भने यहीबेला नेपालमा काम गरिरहेका भारतीयहरु यहाँ काम छाडेर आफ्नै देश गएका छन् । उनीहरुले छाडेर गएको काममा पनि अहिले अवसर छ । विदेशबाट फर्कनेले त्यो काम गर्नसक्छन् अथवा सरकारले त्यो काममा लगाउन सक्छ ।
यहीबेला नेपालमा काम गरिरहेका भारतीयहरु यहाँ काम छाडेर आफ्नै देश गएका छन् । उनीहरुले छाडेर गएको काममा पनि अहिले अवसर छ । विदेशबाट फर्कनेले त्यो काम गर्नसक्छन् अथवा सरकारले त्यो काममा लगाउन सक्छ ।
अहिले कोरोनाको जोखिमसँगै विदेशबाट फर्कनेमा मनोवैज्ञानिक त्रास छ । देशमा गएर के गर्ने, काम पाइएला नपाइएला भन्ने अन्यौलता छ । तर यता नेपाललाई पनि श्रमिक त चाहिँएको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सक्न छ । विमानस्थलहरु बनाउन छ । खाने पानीदेखि जलविद्युत आयोजनाहरु सक्न छ । त्यसैले त्यो त्रास हटाउनका लागि खासगरी सरकारले र दूतावासले एउटा एप बनाउन पर्‍यो ।
रोजगारदाताले पनि आफूलाई आवश्यक परे अनुसारको श्रमिक छनोट गर्न पाउथें ।
तीन वटै सरकारले सबैभन्दा पहिला त अहिले विदेशबाट फर्कनेको मनोविज्ञान जित्न आवश्यक छ । कृषिमा लाग्नका लागि संरचनागत समस्याहरु छन् । भूमि वितरणको समस्या छ । यस्तै यस्तै विविध समस्याले युवाहरु विदेश गएका हुन् ।
यहाँ २५ हजारको काम नगर्ने तर त्यही २५ हजारका लागि लाखौं रुपैयाँ तिरेर विदेश जाने नेपालीको मनोविज्ञानलाई चिर्न जरुरी छ ।
डा. गुरुङ आप्रवासन विज्ञ हुनुहुन्छ ।